MASKAXAHA WEJIGA AH EE FOOLXUMAHA GURIGA: "DAHAB" LEH TURMERIC IYO MALAB, OO LEH MUUSKA, FINAN IYO LAALAAB IYO WALXO KALE OO LOOGU ISTICMAALO KONDOMOOLAJIYADA - BEER CAGAARAN
Maqaarkeena wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah iyada oo aan loo eegin da'diisa. Gabar kasta waxay rabtaa in lagu daryeelo alaabta lagu sameeyay maaddooyinka dabiiciga ah.
Si aad u hubiso tayada alaabta, waxa fiican inaad karsato naftaada. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa shakhsiyaadka, taas oo ku saleysan sinjiyada. Tixgeli caawinaada qalabkaas iyo inaad la wadaagto suugaanta kariska.
Waxyaabahani waxa uu kulaalayaa maqaarka, si kor loogu qaado wareegga dhiigga iyo dhammaan hababka dheef-shiid kiimikaadka. Rabshadaha waxaa ku jira fitamiino badan, asiidh amma ahiyo sidoo kale haraaga. Dhammaan qaybahaas ayaa xajin kara maqaarka cuncun leh ama bararsan, iyo sidoo kale ka saarida waxyaabaha dufanka leh.
Saamaynta kuleylaha waxay caawineysaa in la yareeyo muuqaalka calaamadaha fidsan iyo maqaarka ka dhigo mid aad u cufan.
Sifoyin waa walax aad u fiican oo antioxidant iyo antimicrobial. (wuxuu si gaar ah uula dagaalamayaa streptococci iyo staphylococci). Waxaad u isticmaali kartaa adigoo ah antiseptic boogaha yaryar.
Isticmaalka alaabta saldhigga ku salaysan ayaa ku siin doonta natiijooyinka wanaagsan ee soo socda:
caadeysiga qanjidhada xaydhka;
yareynta foosha iyo dareenka;
guduudashadu way baaba'aysaa, sanaaciga maqaarku wuxuu noqdaa mid xitaa oo caafimaad qaba;
epidermisku wuxuu noqonayaa mid cusub oo tayada leh, barar barar ah;
daal iyo maqaarka haragga ayaa hoos u dhaca, dheelitirka tamarta ayaa dib loo soo celiyaa;
dib u cusbooneysiinta maqaarka iyo kicinta ayaa ka dhacda heerarka gacanta.
Sida dhirta oo dhan, xaaladaha qaarkood sinjibiintu waxay ka hortageysaa jidhka guud ahaan iyo maqaarka gaar ahaan.
Sidaa darteed, haddii aadan raacin qiyaasta inta lagu jiro habka diyaarinta ama isticmaalka badeecadaha marar badan, marawaxadu waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah.
Dadka leh maqaar aad u xasaasi ah laguma talinayo in ay isticmaalaan saliid asaasi ah oo ku salaysan sheygan.
muuqaalka calaamadaha ugu horreeya ee gabowga;
foosha iyo dhadhanka maqaarka;
caajis iyo cawl;
finan joogto ah.
dhiig-bax joogto ah;
Tilmaamaha talaabo-tallaabo ee loogu talagalay diyaarinta iyo isticmaalka maaskarrada suunka ee guriga
Dib-u-soo-kabasho leh macaan, malab iyo muuska
Iyada oo isbinaajka.
Xiddiga xididka leh dhererka 3-4 sentimitir, 200 garaam oo isbinaajka cusub ah iyo 50 garaam oo naaso ah, oo lagu daro blender.
Ka dibna ku dar 120-garaac oo ah malab iyo saxarka muuska.
Dhammaan kuwan mar kale waa isku daraan gacanta.
Codso maaskaro 20-30 daqiiqo hal mar asbuucii. Sifoyin waa in la gooyaa qaybo yaryar.
Maaskaro dahab ah.
Diyaarinta "Maaskarada Dahabka" ee wejiga waxaad u baahan tahay inaad qaadato 10 garaam oo sharoobada ah, 40 garaam oo kaabash ah iyo qadar isla malab ah.
Rootku wuxuu u baahan yahay in la yareeyo wax yar, laakiin ma aha mid aad u badan, sidaa darteed ma u ogolaanayo in badan oo casiir ah, haddii kale masaasku wuxuu noqon doonaa mid aad u dhif ah.
Ka dibna ku dar shuban iyo ku dar malab.
Si kasta oo fiican u qalloo oo u dhaqso isla markiiba maqaarka.
Ka ilaali maaskaro in ka badan 10 daqiiqo laguma talinayo, sababtoo ah galiyaha ayaa gubi kara maqaarka.
1 nooc oo maaskaro ah.
5 g ginger ground ayaa kala diri jiray 0.1 litir oo biyo kulul.
Qoyso suufka suufka tilmaanta iyo si fiican u dheji finanka. Waa lagama maarmaan in la qoyo habka ugu yaraan saacad gudaheed maqaarka maqaarku waa qoyan yahay.
2 nooc oo maaskaro ah.
Qaado 20 garaam oo dhoobo ah (sida caadiga ah caddaan), 15 ml oo ah decoction chamomile iyo shaah cagaaran, iyo sidoo kale 20 garaam oo ginger.
Isku qas dhamaan walxaha oo ku dabool maqaarka mudo ah 15 daqiiqo.
Ku dhaq biyo yar oo qabow.
Laga soo bilaabo maqaarka
10 garaam oo galab ah;
nus shaaha oo malab ah;
5 ml oo liin ah;
30 garaam oo ah labeen dhanaan oo labeen dhanaan ah;
laba ampul oo vitamin E.
Dhamaan waxaad u baahan tahay si aad isugu qasto oo u codso wejiga 20 daqiiqo. Isticmaal maaskaro laba jeer toddobaadkii.
Isku qas 40 graam oo ginger iyo digaag roodhida ah.
Dalbo dhawr jeer toddobaadkii nus saac.
Waxaan soo bandhigi karnaa inaan ku aragno daawo muuqaal ah oo loogu talagalay diyaarinta maaskaro waji ah oo ka soo baxaya laalaabkii:
Si loo cirib tiro dufanka
5 ml oo ah soojiifinta ginger;
hal shaaha oo ah sonkorta qamriga iyo qadar isku mid ah dhoobo;
3-4 ml oo saliid ah oo saliid ah iyo qadar isku mid ah oo shaaha laga sameeyey.
Isku qas wax kasta oo codso wejiga saddex meelood saddex meel. Biyo raaci biyo qabow.
Waxaad qaadan kartaa:
5 garaam oo rooti ah oo dufan leh;
nus shaaha oo ah shaaha cagaaran oo xoog leh.
Isku qas qaybaha iyo saliidayn maqaarkooda, adigoo sheyga saaraya dhowr daqiiqadood.
Waxaad u baahan tahay inaad qaadato saddex dhibcood oo ah saliid saliida ah, rooti, ​​shuban iyo shaaha yar ee saliidda.
Saliidaha dufan iyo dhaqdhaqaaqa maskaxda, laakiin inta ugu badan ee suurtogalka ah u xoqin maqaarka. Waxaad ku nadiifin kartaa rubuc saacad ah adoo isticmaalaya rooga qurxinta.
Waxaa jira ikhtiyaar iyo wax badan oo fudud si loo diyaariyo:
Isku qaso sinjiga iyo malab 1: 2.
Codso wejiga oo sug 20 daqiiqo. Biyo raaci biyo qabow.
Dhammaan noocyada maqaarka
Isku qaso sinjiga iyo saliida saytuunka. Shidaalku waa inuu noqdaa laba jeer. Maskaxdaada wejigaaga iyo qoortaada u qabo oo ku hay illaa 15 daqiiqo.
Qaado laba qaado oo ah rooti jiiska iyo malab iyo 5 ml oo liin ah. Dhamaan isku darka, ha diyaargaroobaan, wejiga saddexaadna hal saac.
Waxaan soo bandhigi karnaa si aad u aragto cuntooyinka fiidiyowga loogu talagalay diyaarinta maaskaro dhamaan noocyada maqaarka:
Waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo dhoobo iyo xidid la jeexay qiyaastii isla qiyaasta shaaha cagaaran ka hor inta aan joogtada ah ee kiriimka labeen dufanka la sameeyay. Maskaxda maqaarka oo sug ilaa nus saac.
Doorashada labaad ee nadiifinta maqaarka waa in lagu daro liin iyo nooc kale oo dhoobo ah oo kor ku xusan qaybaha kor ku xusan. Ka dhig maaskaro isla waqti isku mid ah.
Laga soo bilaabo suuxdinta
Si aad u yareeysid muuqaalka shimbiraha iyo da'da da'da, waxaad u baahan tahay inaad qaadato saddex dhibcood oo saliid galbin ah, iyo sidoo kale canabka, saytuunka iyo sisinta. Iska xaji maqaarka wejiga oo ka tag meel saddex meelood meel ah saacad. Biyo diirran raaci kadibna qabow. Iyo sidaas dhowr jeer.
5 dhibcood oo saliid ah oo saliid ah, shaaha yar ee kefir dufan, 40 garaam oo farmaajo caano ah oo qallalan iyo dhir udub isku darka. Jirrada waa in la nadiifiyaa inta aan la isticmaalin. Ku xafid maaskiga saddex meelood saddex saac.
Ku qiyaas 4 santimitir oo ah xididada xididada hayso, ku dar 20 ml oo casiir ah oo casiir ah iyo 80 garaam oo malab ah.
Isku qas ilaa inta suunka iyo qaboojiyaha dhowr saacadood.
Waa lagama maarmaan in la daboolo maaskaro 10 daqiiqo.
Chamomile, calendula iyo sage ku shub biyo karkaraya. (Half galaas ah oo geedo ah ayaa lagu shubay galaas biyo ah).
Ka dib markaad qaboojisid, ku dar labo shaambadood oo rooti jeex ah oo maraq ah.
Ku tirtir maqaarka maqaarka subaxda iyo fiidka.
Wixii ku habboon
60 garaam oo malab ah, 50 ml oo ah kefir dufan ah iyo qadar isku mid ah casiir liin leh oo lagu qasi karo walxo biriig ah. Codso maaskaro wajiga iyo qoorta. Sug 10 daqiiqo oo raaci biyo qabow. Iyadoo diyaarinta saxda ah, maaskana waa inuu gubaa wax yar. (Laakiin yar yar!)
Waxaad qaadan kartaa qaado oo ah baako iyo malab iyo ku dar 10 ml oo liin ah. Dhammaan isku darka iyo codso wejiga iyo décolleté seddex meelood oo saacad ah.
Dhamaan weelasha lagu sharraxay waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo 2-3 jeer toddobaadkii. Haddii nidaamkan la sameeyo si ka yar, saameyntu waxay noqon kartaa mid aad u yar ama aan la arki karin.
Kareemka wajiga ee salamka
Khubarada ayaa sheegaya in kiriimka diyaarka ah uu ku habboon yahay dhammaan noocyada maqaarka waxaana loo isticmaali karaa maalin kasta.
Maxaa loo baahan yahay si loo kariyo?
Xoqto xididka 4-5 sentimitir dheer.
On 80 ml oo saliid ah oo khudradda iyo sisinta.
1 dhalo vitamin E.
8-10 dhibcood oo liin ama liin macaan.
100 ml oo casiir ah kookaha.
Nadiifi sinjiga, kudaafka xawaashka ganaaxa isla markiiba ku shub labo saliid si aan sariirta u helin waqti aan qalajiyo.
Isku qas wax walba, ku shub faytamiin E iyo casiirka si aad u dooratid (xusuusnow in casiir liin uu leeyahay saamaynta anti-gabowga).
Sida caadiga ah subag kookheer kululaynayo qubeyska, laakiin sidaa darteed ma karkariyo, laakiin gebi ahaanba kala diri.
Ka qaad kuleylka, u ogolow inuu wax yar qaboojiyo oo ku shub qeybaha haray.
Wax walba waa in si fiican loo isku qasan yahay, markaa way ka fiican tahay in lagu sameeyo blender.
Kareemka soo go'ay ayaa diyaar u ah inuu si dhakhso ah u isticmaalo, laakiin waxaad u ogolaan kartaa inuu soo dhajiyo dhowr saacadood. Ku kaydi badeecadda waa inay ku jirtaa qaboojiyaha. Waxaa fiican in la isticmaalo subaxdii iyo fiidkii.
Ginger waa dukaanka alaabta fitamiinada, macdanta iyo antioxidants.Sidaa daraadeed, waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya cuntada cuntada ee loogu talagalay maaskaro wajiga ah, laakiin sidoo kale in lagu qoro shaybaarka mihnadeed. Laakiin isla waqtigaas, xididgan waxaa loo yaqaan gubasho, iyo sabab wanaagsan. Ka dib markaad raacdo talooyinka isticmaalka, waxaad heli kartaa gubasho ama maqaarka ugu yar ee cuncun leh. Laakiin haddii aad sameyso wax kasta oo sax ah, maqaarku wuxuu noqonayaa mid caafimaad qaba, shucaac leh, gaaban oo dib loo soo celiyo.